Imivuzo emikhulu -I-Anshun AKF Medical Technology Co, Ltd.
Imbuyekezo yeNkuthazo yoMvuzo:
I-AKF ijonga iitalente njengobutyebi obuxabisekileyo beshishini kwaye i-AKF ihlala ithathela ingqalelo ukukhula nokukhula kwabasebenzi kwinkampani. Ibeka phambili inkqubo entsha yokuphuhlisa ikhondo lomsebenzi ebizwa ngokuba yi "ileli enye, iiphuli ezimbini". "Ileli enye" ​​ibhekisa kula majelo mabini okuphucula ubuchwephesha kunye nolawulo lwendlela. "Amachibi amabini" abhekisa "kwichibi lezixhobo zobungcali" kunye "necadre resource pool".
Inkampani isebenzisa umrholo ophakathi nongaphezulu kunowesiqhelo kumzi mveliso kwizikhundla ngokubanzi, kunye nomvuzo ophakamileyo okhuphisanayo kwizithuba eziphambili, samkela ukubuya kwexesha elide kunye nembuyekezo yexesha elifutshane kunye nokudityaniswa okungafaniyo kwembuyekezo yemali kunye nembuyekezo engeyoyemali ifom, ukuze ngokubanzi kutsalwe iitalente ezikumgangatho ophezulu ukuze bazinikele kwimishini kunye nomsebenzi.
Ngokwendlela yokuhambisa, siza kuthi ngokungathandabuzekiyo sifikelele kusilelo lwengeniso ngokweziphumo zentsebenzo kunye novavanyo lwegalelo ukuqinisekisa ukubuya okuphezulu kwabo banentsebenzo ephezulu. Ngaphantsi kwemeko yokusebenza okufanayo, ithuba lityekela kubasebenzi abanobomi obude benkonzo, ukuzinikela kunye nokuzazisa okuphezulu kwenkcubeko. Malunga nohlengahlengiso lwemivuzo, inkampani yamkela inkuthazo kwangexesha, kwaye igxininise unxibelelwano lweendlela ezimbini kwinkqubo, ukuze badlale ngokufanelekileyo indima "yomvuzo" ekuthambekeni nasekukhuthazeni intsebenzo yomntu.
I-AKF iququzelele izibonelelo zenkuthazo yamanqanaba amaninzi ukuvuza abantu kunye namaqela ngomsebenzi ogqwesileyo ukuze kukhuthazwe ukuzibandakanya kwabasebenzi. Inkqubo yenkuthazo yenkampani ye-AKF ijolise ekusebenzeni kwaye ayibandakanyi kulungelelwaniso. Ngokwentsebenzo, inkqubo yenkuthazo yenkampani ye-AKF yahlulwe yangamacandelo amabini: inkuthazo kwangoko kunye nesishwankathelo sonyaka kunye novavanyo.
Isicwangciso se-Inshurensi: abasebenzi banelungelo lokufumana i-inshurensi esemthethweni, kwaye inkampani ibonelela nge-inshurensi yorhwebo kubasebenzi bethu ngokweempawu zesithuba. Ikhefu elihlawulelweyo: iholide ehlawulwa ngonyaka ukongeza kwiholide ezimiselwe ngurhulumente, abasebenzi baya kukonwabela iholide ehlawulwayo yonyaka kunye nekhefu lokuncancisa, kunye nePaternity Leave. Ezinye iiposti ziyonwabela ikhefu lasekhaya ngaxeshanye.
Inkonzo yokutya: Ukubonelela ngokutya simahla kubasebenzi bethu.
Indawo yokuhlala yabasebenzi: ukubonelela ngendawo yokulala kubasebenzi abanesidingo kunye nokubonelela ngendawo yokuhlala efanelekileyo.
Abasebenzi abahlala ngaphandle kwenkampani baya kubonelela ngenkxaso mali yokuhlala kubo .Isicwangciso sokhenketho: abasebenzi bonwabela ithuba elinye leholide yokhenketho minyaka le.